आज चम्केलान् लुकाकु र एमबाप्पे ? - Khabar Break | Khabar Break
आज चम्केलान् लुकाकु र एमबाप्पे ?
एजेन्सी,रसियामा जारी फिफा विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनलमा आज (मंगलबार) फ्रान्स र बेल्जियमबीचको खेल हुँदैछ । फ्रान्स समूह ‘सि’ का दुई खेलमा जित र एक खेल बराबरी खेल्दै समूह विजेता भएर प्रि—क्वार्टरफाइनल पुगेको थियो । प्रि—क्वार्टरफाइनल खेलमा
रसिया विश्वकपमा फ्रान्सका अर्का उत्कृष्ट खेलाडी हुन् एन्टोइनी ग्रिजम्यान । उनले अहिलेसम्म रसियामा खेलेका ५ खेलमा ३ गोल गरेका छन् । ग्रिज्मयान बल पास गर्ने तरिका र मैदानमा बल पाएपछिको उनको दौडले पनि बढी चर्चामा रहे । उनले फ्रान्स र अष्ट्रेलियाबीचको समूह चरणको पहिलो खेलमा अष्ट्रेलियालाई २—१ गोलले पराजत गर्ने क्रममा एक गोल गरेका थिए ।
जारी प्रतियोगितामा ग्रिज्मयानको दोस्रो गोल प्रि—क्वार्टरफाइनलमा अर्जेन्टिनाविरुद्ध पेनाल्टीमार्फत् गरेका थिए । ग्रिज्मयानले तेस्रो गोल क्वार्टरफाइनलमा उरुग्वेविरुद्धको खेलमा पहिलो गोल गर्दै फ्रान्सलाई अग्रता दिलाएका थिए । ग्रिजम्यानले रसियामा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै बेल्जियमविरुद्धको सेमिफाइनल खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै फ्रान्सलाई फाइनलमा पुर्याउन सक्ने खेलाडीका रुपमा हेरिएका छन् । २७ वर्षीय ग्रिज्मयानले अहिलेसम्म फ्रान्सका लागि खेलेका ५९ खेलमा २७ गोल गरिसकेका छन् ।
रोमेलु लुकाकु — बेल्जियम
बेल्जियमका कप्तान इडन हजार्डलाई विश्वकपमा अब्बल नेतृत्व क्षमता भएका खेलाडीका रुपमा हेरिन्छ । बेल्जियमका फरवार्ड हजार्डले जारी विश्वकमा २ गोल गरेका छन् । बेल्जियम र ट्युनिसियाको खेलमा ट्युनिसियालाई ५—२ गोलले पराजित गर्ने क्रममा हजार्डले २ गोलको योगदान गरेका थिए ।
बेल्जियमका गेम मेकरका रुपमा चिनीने हजार्ड मिडफिल्डबाट खेल्ने गर्छन् । उनी विपक्षीलाई रोक्दै उत्कृष्ट पास निकाल्दै सहकर्मीसम्म सफल पास गर्न सक्छन् भने मौका मिलेको अवस्थामा आफै गोल गर्न पनि सिपालु छन् । यसअघिका खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका हजार्डले सन् १९८६ पछि दोस्रो पटक सेमिफाइनल खेल्न लागेको बेल्जियमलाई फाइन पुर्याउने रणनीतिमा रहेका छन् ।